Tetikasa Miz’Art: fiofanana momba ny zavakanto | NewsMada
Tetikasa Miz’Art: fiofanana momba ny zavakanto
Nifarana tamim-pomba ofisialy, omaly, teny amin’ny Is’Art galerie eny Ampasanimalo, ny atrikasa momba ny kanto araka endrika amam-bika na “arts plastiques”. Nanatrika izany ireo mpampiofana na mpanabe miisa dimy, avy amin’ny fikambanana tsy miankina efatra, samy miahy ireo sokajin’olona marefo.
Tafiditra ao anatin’ny sokajy “Fampianarana ara-javakanto”, ao amin’ny tetikasa Mir’Art, izao atrikasa izao. Tanjon’ny tetikasa, amin’ny ankapobeny, ny hampiroborobo ny zavakanto ho an’ny sokajin’olona tsy ankanavaka. Ao anatin’ny sokajy “Fampianarana ara-javakanto”, hamafisina ny fahafahan’ny ankizy sy ireo sokajin’olona marefo maneho hevitra, amin’ny alalan’ny zavakanto.
Mba hanatrarana izany, nomena fiofanana aloha ireo mpanabe azy ireo. Marihina fa fikambanana tsy miankina miisa efatra no nandefa mpiofana, izay mitontaly dimy. Naharitra dimy herinandro ny atrikasa. Taorian’izay, niatrika fampiharana avy hatrany ireo mpiofana, niaraka tamin’ireo ankizy sy sokajin’olona iandraiketany, izay mitontaly 40. Telo herinandro kosa ny faharetan’io fampiharana io.
Tsy mifarana hatreo fa mbola hisy ny andiany faharoa amin’ny fanofanana mpanabe, ao anatin’ny tetikasa Miz’Art, sokajy “ Fampianarana ara-javakanto”, amin’io volana desambra io. Miisa valo ny mpanabe efa nisoratra anarana handray anjara amin’izany.
Ankoatra ity sokajy ity, misy koa ny hetsika mikasika ny “Fanatsarana ny tanàn-dehibe”, izay mbola tafiditra ao anatin’ity tetikasa ity hatrany. Efa nisy ny fanehoana zavakanto ankalamanjana ary hitohy amin’ny fanatsarana ireo zaridaina sy toeram-pialam-boly eto an-dRenivohitra izany.
Ankoatra io sokajy faharoa io, sokajy fahatelo ao anatin’ny tetikasa Miz’Art ny fampivelarana ny “Fahalalahana maneho hevitra”. Efa nisy ny famelabelarana narahina adihevitra notanterahina tamin’izany. Teo koa ny hetsika natokana ho an’ny ankizy, niompana tamin’izay fahalalahana maneho hevitra izay. Hifarana ny volana febroary 2019 ny tetikasa. Antenaina ny hisian’ny andiany manaraka.